[Saturday, August 12th, 17] :: Kenyatta oo markale la doortay
Nairobi (RH) Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee Taladadii ka dhacday waddanka Kenya, sidaas waxaa Jimcihii sheegay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan.
Kenyatta ayaa ka adkaaday ninka mudda dheer uu loolanka kala dhexeeyay Raila Odinga kaasoo ku soo xigay tirinta codadka doorashada.
Gudida doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in ninka 55-jir ee ganacsadaha isla markaana uu dhalay aasaasaha Kenya in uu helay codad hubanti ka dhigi kara in uu markii labaad xafiiska joogo shan sanno.
Kenyatta ayaa helay codad gaaraya 54.27% cadadkii kama dambeysta sidaas oo kale ayaa gacanta loogu galiyey natiijo natiijada hordhaca ahayd.
Odinga ayaa helay codad gaaraya 44.74%.
Madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey warbaahinta dowladda isagoo sheegay in mucaaradkiisa aysan ahayn cadow.
“Waxaa nahay dhammaan muwaadiniinta Kenya, sida la ogyahay haddii uu tartan dhaco qof baa guuleysanaya qof kalena waa uu guu dareesanayaa. Balse waxa nahay dhammaan hal qaran oo la yiraahdo Kenya.”ayuu yiri.
Kenyatta ayaa sheegay in uu doonayo in uu la shaqeeyo xisbiga mucaaradka ee Kenya ee loo soo gaabiyo (NASA).
Madaxweynaha ayaa u sheegay dadka reer Kenya in dalka uusan u baahneed rabshado.
Madaxweynayaasha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Uganda Yoweri Museveni iyo sidoo kale Rwanda Paul Kagame ayaa hambalyo u diray madaxweyne Kenyatta sida lagu sheegay qoraalo ay soo dhigeyn barta Twitter-ka.
Mucaaradka waxa ay ku baaqeyn in codadka dib loo tiriyo.
Odinga, oo ah 72-sanno jir waa waa siyaasi horre wuxuu tartamay markii afaraad, wuuna diiday in uu aqbalo natiijada soo baxday, isagoo sheegay in codadka la jabsaday.
Isagoo had laayey wax yer kaddib inta aan lagu dhawaaqin nastiijada kama dambeysta, ayuu Musalia Mudavadi, oo ka tirsan NASA, wuxuu sheegay in aysan ka mid noqon doonin kooxaha taageeraya guusha Kenyatta.
Goobjoogayaasha caalamiga oo ku baaqay xasillooni
Goor horre oo Jimcihii, ayaa goobjoogayaasha caalamiga oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Midowga Yurub waxa ay ugu baaqeyn dhammaan musharrixiinta in ay ku qancaan nastiijada guddiga doorashada.
In ka badan 400 oo goobjoogayaal caalami ah — oo uu ku jiro xoghayihii horre ee arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka qeybgalay doorashada.